Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » Harada Powell oo baaba'aysa: Aad bay uga xun tahay dalxiiska!
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Isbeddelka cimiladu wuxuu noqday mid dhab ah oo arrin weyn u ah warshadaha dalxiiska ee Lake Powell, oo ka mid ah gobolka dalxiiska ee ugu caansan Arizona iyo Utah, USA.
Isbeddelka cimiladu wuxuu noqday mid dhab ah Arizona iyo Utah iyadoo harada Powell ay dhibaato ka jirto
Harada Powell khadkii biyuhu wuxuu hoos ugu dhacay hoos u dhac taariikhi ah, isagoo khasaare weyn u gaystay warshadaha maxalliga ah
Harada Powell waa kayd biyood dad sameeyay oo ku yaal Colorado River ee Utah iyo Arizona, Maraykanka. Waa goob fasax oo weyn oo ay booqdaan qiyaastii laba milyan oo qof sannad walba.
Tani weli waa ku dhawaaqista ku saabsan Dalxiiska Lake Powell website:
Waan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno martida harada Powell waxaanan rajeyneynaa booqashadaada. Fadlan ka hel macluumaad la cusbooneysiiyay oo ku saabsan isbeddelada hawlgaladayada iyo adeegyadayada waqtigan marka aan dib u furno.
Caafimaadka iyo badbaadada booqdayaasha, shaqaalaha, mutadawiciinta, iyo la -hawlgalayaasha Lake Powell ayaa ah mudnaanta koowaad ee koowaad. Adeegga Beerta Qaranka (NPS) wuxuu si wada jir ah ula shaqeynayaa dowladda dhexe, gobolka, iyo maamulada maxalliga ah si loo hubiyo badbaadada martidayada loona raaco tilmaamaha caafimaadka ee ugu casrisan.
Xaaladaha cimiladu waxay noqonayaan kuwo sii kululaanaya oo qallalan oo khatarta dabku ay sii kordhayso maalin kasta. Soo -booqdeyaashu waa inay taxaddar dheeraad ah ka muujiyaan dib -u -dhiska dhulalka dadweynaha marka khatarta dabku kordho.
Xayiraadaha dabka ayaa sabab u ah khatarta dabka oo sii kordheysa iyo baahida loo qabo in laga hortago dabka kaynta ee dadka sababa inta lagu jiro xaaladaha dabka ee halista ah, si kor loogu qaado caafimaadka dadweynaha iyo badbaadada, iyo in la ilaaliyo ilaha. Dab -demiska iyo badbaadada dadweynaha ayaa ah mudnaanta ugu sareysa inta lagu jiro xilliga dab -damiska.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan xannibaadaha dabka ee dhulalka kale ee dadweynaha ee Arizona iyo Utah, fadlan booqo www.wildlandfire.az.gov iyo www.utahfireinfo.gov. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dababka kaymaha ee dalka oo dhan, booqo inciweb.nwcg.org.
Waa tan xaqiiqdu:
Harada Powell waxay ku taal waqooyiga Arizona waxayna ku fiddaa koonfurta Utah. Waa qayb ka mid ah Wabiga Colorado ee Glen Canyon National Recreation Area. Iyada oo ku dhawaad ​​2,000 mayl oo xeeb ah, qorax aan dhammaad lahayn, biyo diirran, cimilo qumman, iyo qaar ka mid ah muuqaalka ugu quruxda badan galbeedka, harada Powell waa goobta ugu dambaysa ee ciyaarta. Ijaar doon doon, sii joog kaamkayaga, ama ku raaxayso hoygeena oo ku bood safarka saxa ah.
Adeegga Beerta Qaranka ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay horaantii bishaan in doonyaha guryuhu aysan sii isticmaali karin Wahweap Launch Ramp, oo ah goobta ugu mashquulka badan ee doontu ka socoto aagga. Doonyihii hore loogu tuuray biyaha ayaa looga digay inay haystaan ​​wax ka yar toddobaad si ay ugu soo laabtaan dhulka ama ay halis ugu jiraan inay maroon noqdaan.
Magaalada yar ee Page waxaa ku nool 7,500 oo qof oo aan lahayn doontii guriga, warshadaha dalxiisku ma laha wax badan oo sii wadi kara socodsiinta magaaladan yar ee firfircoon. Waa dhibaato ku haysa bulshada Bogga.
In kasta oo isbeddelka cimiladu uu sii xumeeyay dabkii duurjoogta, kulaylkii, iyo daadadkii roobka xagaaga, waxay sidoo kale dhibaato weyn ku haysaa warshadaha dalxiiska ee ku tiirsan harada Powell. Toddobaadkii la soo dhaafay khadka biyuhu wuxuu gaaray heer hoose oo taariikhi ah oo ah 3,554ft, heer aan la arag tan iyo 1969 markii kaydka markii hore la buuxiyay. Kaydka weyn wuxuu hadda yahay saddex meelood afar meelood oo madhan wuxuuna sii socon doonaa inuu hoos u dhaco illaa guga soo socda sababtoo ah waxaa la diiwaangeliyay heerarka barafka oo hooseeya ee webiga Colorado.
Toddobo ka mid ah doonyaha dadweynaha ee ku sii qulqulaya harada Powell, kaliya Bullfrog oo ku taal koonfurta Utah ayaa weli ah mid si habsami leh u shaqeyneysa sababtuna waa fiditaanno taxane ah oo dhowaan dhacay. Laakiin taasi sidoo kale waxay dhowaan noqon kartaa mid aan la heli karin.
Sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay wargeyska Guardian ee fadhigiisu yahay UK, Xafiiska Dib-u-soo-celinta Mareykanka wuxuu saadaaliyay inay jirto 79% fursadda harada Powell ay hoos uga dhici doonto 29ft meel kale oo taariikhi ah hadda “mar uun sannadka soo socda”.
Sida laga soo xigtay warbixinta Adeegga Beerta Qaranka, Glen Canyon wuxuu lahaa 4.4 milyan oo booqdeyaal ah sannadka 2019, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah jardiinooyinka ugu booqashada badan dalka. Booqdayaashu waxay ku bixiyeen $ 427m Bogga iyo nawaaxigeeda waxayna taageereen 5,243 shaqooyin, oo ay kujirto inay siiso il muhiim ah oo shaqo Navajo Nation.
Waxaa jira fursado badan oo madadaalo ah oo ku yaal dooxyada dhinaca ee ka soo baxa harada Powell.
Warshadaha doontu waxay isku raacsan yihiin in aagagga muuqaalka ah ee dhowaan laga heli karo Glen Canyon ay aad ugu soo jiitaan dalxiisayaasha.